Astro ကြောင် Lightning Box ကိုဂိမ်းများကနေတရုတ်ရေးရာ slot ကဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. တရုတ်ရေးရာ slot ကဂိမ်းအတော်များများကိုထွက်အဲဒီမှာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခုကြောင့်ဂိမ်း၏ထူးခြားသောရပ်တည်. Lightning Box is one company that has been creating games that have an out of the box creativity behind them. ဒီဂိမ်းထူးခြားတဲ့နှင့်ပျော်စရာဂိမ်းဟာသူတို့ရဲ့စာရင်းမရှိသေးပါအခြားအထင်ကြီးထို့အပြင်ဖြစ်ပါသည်. ဂိမ်းကိုလည်းအလွန်ကောင်းစွာဂိမ်း compliments ရာအချို့တကယ်ကောင်းသောဂရပ်ဖစ်ရှိပါတယ်. လည်း, ဒါကြောင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အပိုဆု slot ကအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်.
လျှပ်စီး Box ကိုချာကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ slot ကဂိမ်း developer ဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကအဆက်မပြတ်သူတို့ရဲ့ slot ကဂိမ်းကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်အသစ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သင်္ချာမော်ဒယ်တွေကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားကြသည်. ဒါကြောင့်, သင်တစ်ဦး Lightning Box ကို slot ကကစားရန်ဆုံးဖြတ်လာမယ့်အချိန်, ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုမျှော်လင့်ထား.
အဆိုပါဂိမ်းလိုဂို သူ့ဟာသူရိုင်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်. ဒါဟာ reels ပေါ် 3,4နှင့်အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားသင်္ကေတ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူအပေါငျးတို့သညျအခွားသင်္ကေတတစ်ခုအစားထိုးအဖြစ်ပြုမူ. ဤသည်မှာသင်္ကေတအတော်လေးအသုံးဝင်သည်နှင့်သင်ပိုမိုမကြာခဏမထက်အနိုင်ရ payline ဖွဲ့စည်းရန်ကူညီပေးသည်.
အဆိုပါ Reelfacta reel ဒီဂိမ်းရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအမှန်တကယ်ဂိမ်း၏အလယ်တွင် reel ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်တက4သို့ခွဲထွက်နေသည်×4 ဇယားကွက် hosting 16 သင်္ကေတများ. အခုတော့ပိုပြီးသင်္ကေတများနှင့်အတူ, paylines အနိုင်ရဆင်းသက်တစ်ခုတိုးလာအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ. ဒါပေမယ့် Reelfacta reel အတွက်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့သင်္ကေတကွိမျသာအသုံးပွုနိုငျ. အဆိုပါ reel ကိုလည်းအခမဲ့လှည့်ခြင်းများဆုကြေးငွေပတ်ပတ်လည်အတွင်းမှာကစားရန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်.
ဤတွင်ဇယားကွက်, အရှင် multifold အနိုင်ရသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်လွင်ပြင်နှင့်ပြည့်စုံသည်. ဒီတစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းက အပိုဆု slot ကအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ် ဒီဂိမ်းကနေသင့်ရဲ့ပြန်ဝေးသင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပါလိမ့်မယ်.
ဤ အဆိုပါဂန္ slot နှစ်ခုမှနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးမြှဂိမ်းနှင့်အတူသစ်တစ်ခုအသက်အရွယ် slot ကဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါဧရာမ 1296 အနိုင်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေ, စင်စစ်သင်တို့သည်ဤ slot ကထံမှကြွယ်ဝသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုအသီးအနှံကိုရိတ်ရကူညီပေးပါမည်. ထို့ကြောင့်, ဒီကဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အဖြစ်လှည့်ဖျားရကျိုးနပ်သည်တ slot ကဖြစ်ပါတယ် အပိုဆု slot ကအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်.